ဟက်ဆန် ပြန်ရလိုက်တာတွေ…. | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Posts Tagged "ဟက်ဆန် ပြန်ရလိုက်တာတွေ…."	3
Comments By PostMPU ---- EASi - TNA - အလင်း ဆက်ကဗျာချစ်သူ များ ၏ ကဗျာပြခန်း အမှတ် (၃) - surmi - KZ ဘ၀ဆိုတာ ၄ / ၂၀၀၈ - TNA - အရီးခင်လတ်စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၅၅ ) ( ဆော်ထည့်လိုက်စမ်းပါ ၊ ဘာသာရေး - ၃ ) - TNA - ဦးဦးပါလေရာကျန်းမာဝဖြိုး အလှတိုး Diet or Exercise - အရီးခင်လတ် - မောင် ပေပျော်အောင်ထားပါ - အရီးခင်လတ် - အရီးခင်လတ်သူငယ်ချင်းများသို့................. လွမ်းချင်း။ - အရီးခင်လတ် - TNAကျွန်​တော့ ပန်းချီ စာ​ခြောက်​ရုပ်​- အရီးခင်လတ် - အလင်း ဆက်နတ်ဖြစ်ရတဲ့ ဒုက္ခ - မောင့်အိုလံပီယာဗားရှင်း - ကြက်အူလှည့် - အရီးခင်လတ်ကျွန်တော်ရယ် 'ဧ၀'ရယ် 'အာဒံ'မဟုတ်တဲ့နောက်တစ်ယောက်ရယ် - အရီးခင်လတ် - aung moethuမြစ်ကျိုးအင်း - ဘဆွေ - KZမယုံလွယ်နှင့်.... - အရီးခင်လတ် - ခင် ခဘာသာမတူတာ ဘာအကြောင်းလဲ.. - အရီးခင်လတ် - မိုချိုကျမ ရဲ့ ဘာသာရေး အမြင် နဲ့ နိုင် ငံရေး ခံယူချက် - အရီးခင်လတ် - မိုချိုကန္နားစီးမိဂီသို့ ... ငါးစိမ်းသည် ဗားရှင်း - Foreign Resident - KZဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ အထ္ထုပ္ပတ္တိ အကျဉ်း နှင့် ရရှိခဲ့သော ဆုများ - အရီးခင်လတ် - kaiအမျိုးစောင့် ဥပဒေ ဆိုတာ ကို ဒီ လို ထပ် ဖြည့်ကြည့် ရင် မကောင်း ဘူး လား။ - အရီးခင်လတ် - အရီးခင်လတ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ - TNA - KyawThein ဘ၀ဆိုတာ ၃/ ၂၀၀၈ - အာဂ - အာဂအဖေ့ နှစ်ပတ်လည်နေ့ဟာ ဘယ်နေ့လည်းဗျာ - Myo Thant - ဦးကြောင်ကြီးမဲရုံသို့လာ မဲပေးကြပါဦး (ဖတ်/ရွေး၊ ဧပြီ+မေ) - Char Too Lan - ကထူးဆန်းမိုးရာသီနှင့်ကလေးများကျန်းမာရေး - TNA - Ma Maကျွန်တော်မမှတ်မိတော့တဲ့ ညီမလေးအတွက်သီချင်းတစ်ပုဒ် - aung moethu - အလင်း ဆက်ကမ္ဘာကျော်ဟာသ - Ma Ma - ဦးကြောင်ကြီးသာယာတင့်တယ် - Ma Ma - မောင်ဘလိူင်မျက်လုံးလေး ကလည်ကလည်နဲ့ အရွယ်ရောက်လူ အကုန်သိတယ် ... :P - Ma Ei -etoneချစ်သော မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာ ဘယ်လဲ ? - nay khin - kaiEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities